ह्याकर किन राख्ने ? | ''Knowledge Never Ends''
ह्याकर किन राख्ने ?
(प्रमुख ह्याकिङ अफिसर,एलियनभल्ट)
यो लेख शुरु गर्न भन्दा अगाडी म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने मैले कुनै कम्प्युटरका अपराधीहरुलाई ‘हायर’ अर्थात नियुक्त गर्न समर्थन गरिरहेको छैन् । यदि तपाईलाई कसैले तपाईको पुर्वाधारको सुरक्षाका लागी धम्की दिदै रकम मागेको छ भने त्यसको समाधानका लागी तपाई सम्विन्धित पक्षक“बम गुहार माग्नुहुन्छ। यद्यपी यदि तपाई अपराधिक हाइजेकिङवाट आफ्नो सिस्टमलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागी ‘ह्याकर’ एकजना उपयुक्त मान्छे हुनसक्छ । एलियनभल्टमा हामी पनि ‘ह्याकर्स’ हरुसंग काम गर्न पाउ“दा गर्भावन्वित महसुस गर्छौ र तिनीहरुको सहायताले हामी हाम्रो उपभोक्तालाई उत्कृष्ट सेवा दिन सफल भएका छौ ।
यदि तपाईलाई चुकुल (स्क्रयू) हटाउनका लागी च्याप्टो टाउको भएको स्क्रयूड्राइभर चाहिन्छ भने के तपाई तेर्सो टाउको भएको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? अवश्य गर्नुहुन्न किनभने यसले तपाईको काम सम्भव पार्दैन । त्यस्तै यदि तपाईले खाल्डो खन्नु छ भने के तपाई चम्चा प्रयोग गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्न किनकी त्यसले तपाईको समय मात्र बर्बाद गर्छ । त्यसैले सहि कामलाई सहि सामग्रीहरु नै प्रयोग गर्ने गरिन्छ , जसअनुसार अहिले कर्पोरेट पुर्वाधारको सुरक्षाका लागी ह््याकरलाई राख्न या नियुक्त गर्न आवश्यक छ तर त्यसो गर्न उनीहरु डराइरहेका छन् । तर मलाई लाग्छ तिनीहरुले केही न केही भुल गरिरहेका छन् ।
मलाई लाग्छ ह्याकर ‘यस्तो मान्छे हो जसले टेक्नोलोजीको स्थिर बाटोहरुको बारेमा सोच्छ। ’ त्यसको कारणका लागी , तपाईले यदि आफ्नो सिस्टम शतप्रतिशत सुरक्षित छ भने जाच्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको शक्तीलाई जाच्नुपर्छ जुन त्यस्तो मान्छेले मात्र गर्न सक्छ जो ‘टेक्नोलोजीको स्थिर बाटोको विषयमा अध्ययन या सोच्ने गर्छ। ’ त्यसैले सबै ह्याकरहरु एकै खाले हुदैनन् , फरक फरक कामका लागी हुन्छन् जुन तल प्रस्तुत गरिएको छ।
‘आउट अफ द बक्स’
मेरो ह्याकरको व्यवहार यस भनाईमा सार्थक भएको छ । कुन कुराले कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर हेर्नु भन्दापनि ह्याकरले त्यसलाई विभिन्न ‘दृष्टी’ बाट हेर्ने गर्छ । ‘लक’ भएको छ कि छैन् भनेर उनीहरुले तपाईको ‘सेक्युरिटी ढोका’ हरु हेर्ने प्रयास गर्दैनन् तर तिनीहरुले भित्तामा धकेल्ने गर्छन् र इट्टाले रोक्छ कि रोक्दैन भनेर हेर्छन् र यदि झ्यालहरुमा सिसा छन् भने पुटिनले त्यसलाई सही स्थानमा राख्न सक्छन् त भनेर जाच्छन्।
‘सक्दिन’ भन्ने तिनीहरुको शब्दकोषमा हुदैन्
धारणक्षमता अर्को एउटा महत्वपुर्ण क्षमता हो ह्याकरको । त्यसैले उनीहरु कुनै पनि प्रश्नको उत्तर ‘नो’ अर्थात सक्दिन भन्न चाहदैनन् । तपाई एउटा ‘लक्ड’ अर्थात बन्द भएको ढोका छोड्दिनुस र त्यसलाई खोल्ने विभिन्न बाटोहरु हुन्छन् जुन ह्याकरको निरन्तर प्रयासले पत्ता लगाउने गर्छ। अवश्य यसको सजिलो उपाय चावी पत्ता लगाउनु नै हो तर यदि त्यो हामीसंग थिएन भने के ‘लक’ खोल्न सकिन्छ? कुनै पनि मुर्ख उपायहरु त्यतीवेला काम लाग्दैनन् तर ह्याकरको उत्साहले नै त्यसलाई सम्भव बनाउन सक्छ ।
एले क्याटका नैतिक कुरा:
अब कोहीपनि मेरो रगतको लागी घुक्नुभन्दा अगाडी म एक मिनेटका लागी अपराधीलाई जबसम्म उनीहरु पुर्नस्थापित हुदैनन् र तपाईहरुले दोश्रो अवसर पाउनुहुन्न तबसम्मका लागीलउनीहरुको सर्भिसको पारिश्रामिक नदिन वकालत गर्न चाहन्र्छु। यद्यपी एउटा ह्याकरले अपराधीको जस्तो सोच्न र व्यवहार गर्न आवश्यक पर्छ।
अपराधीले कहिले पनि नियमको परिधी भित्र बाधिएर काम गर्दैन र धेरैजसो कम्पनीहरु ह्याकरहरुप्रती नकरात्मक दृष्टी राख्छन्।
खाजाका लागी ढिंडो:
पुर्नस्थापित ह्याकरहरुलाई किन जागिर दिन हुदैन् भन्नेमा कुनै ठोस कारण छैन जुन मैले माथी भनिसके। तिनीहरुले गम्भिर अवस्था ल्याउन सक्छन किनभने तिनीहरु पक्राउ पनि पर्ने गर्छन्। व्यवसायिक ह्याकहरु आफैमा गर्भ गर्छन् किनभने सिस्टमहरु छान्नु, अनडिटेक्ट गर्नु र इलेक्ट्रोनिक ‘फिंगर प्रिन्ट’ नछोड्नु लगायतका खुवी उनीहरुसंग हुन्छ ।
एउटा ठुलो टाउको ( बिग हेड):
‘इगोस्टिकल’ अर्थात महत्वाकांक्षी ह्याकरलाई वास्तवमा क्षमतावान ह्याकरको रुपमा मानिदैन्। मैले बसेर विभिन्न सरोकारवालाहरुको कुरा सुनेअनुसार तिनीहरुले अर्काको काम त्यस्तो सक्षम ढंगले गर्दैनन् र आफ्नो महत्वलाई बढी ध्यान दिन्छन् ।
ह्याकरहरुलाई नकरात्मक दृष्टीले गाली र व्यवहार गर्नुका निम्न कारणहरु पनि हुन्:
– ह्याकरहरु आफैमा धेरै बोल्ने र घमण्ड गर्ने गर्छन् तर त्यसलाई त्यागेर आफ्नो क्षमता देखाउन उनीहरु चुक्छन्
– ह्याकरहरु आफ्नो हार बोल्न चाहदैनन् तर तिनीहरुल आत्मलोचनाका साथ वास्तविक कुरा बताउनुपर्छ। – ह्याकरहरु अर्काको समस्या र सफलता जे होस् खिल्ली उडाउन बढी माहिर हुन्छन् जुन उनीहरुले त्याग्नुपर्छ।
अन्त्यमा जो संग संस्थामा बसेर काम गर्ने क्षमता र इमान्दिरता छ उसले सधै आफ्नो नामलाई बदनाम नगराउने ढंगले आजबाटै काम गर्नुपर्छ । जसले ह्याकरप्रतीको मानिसको दृष्टीकोणलाई परिवर्तन ल्याइदियोस्।
← हराइरहेको मलेसियन विमानका रहस्य
बेल्जियमको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली उम्मेदवार →